ဒေါက်တာအေးမောင် အမှု တရားရုံး စီရင်ချက်ပြီးမှသာ အမ်းမြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော်နေရာ ထည့်၊ မထည?? - Yangon Media Group
ဒေါက်တာအေးမောင် အမှု တရားရုံး စီရင်ချက်ပြီးမှသာ အမ်းမြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော်နေရာ ထည့်၊ မထည??
ဒေါက်တာအေးမောင်အမှုနှင့် ပတ်သက်၍ တရားရုံးစီရင်ချက် ပြီးပြတ်ပြီးမှသာ အမ်းမြို့နယ်ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်နေရာကို ကြားဖြတ် ရွေးကောက်ပွဲတွင် ထည့်သွင်း၊ မသွင်း ကြေညာသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်မှသိရသည်။ အမ်းမြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ် တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါက်တာအေး မောင်ကို ဇန်နဝါရီ ၁၈ ရက်က ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားသော်လည်း ပြစ်ဒဏ်မချမှတ်ရသေးသည့်အတွက် ၎င်းမှာ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးအဖြစ် ဆက်လက်တည် ရှိနေသေးကြောင်း ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် ပြောခွင့်ရ ဦးအောင်မြင့်က ဒီမိုကရေစီတူ ဒေးသို့ ဇန်နဝါရီ ၁၉ ရက်က ပြောသည်။
သက်ဆိုင်ရာမှ ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ပါက ၎င်းမှာ ပြည်သူ့လွှတ် တော်ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်သည့်အတွက် ပြည်သူ့လွှတ်တော်မှ လွှတ် တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ဆက်လက် တည်ရှိ၊ မရှိ ဆုံးဖြတ်မည်ဖြစ် ကြောင်း၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်မှ ဆုံးဖြတ်ပြီးမှသာ ကြားဖြတ်ရွေး ကောက်ပွဲတွင် အမ်းမြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် နေရာကို လစ်လပ်နေရာအဖြစ်သတ်မှတ်ကာ ကြားဖြတ် ရွေးကောက်ပွဲတွင် ထည့်သွင်း၊ မသွင်း ပြည်ထောင် စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်မှ ကြေ ညာမည်ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ဆိုသည်။ ”ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ရသေးတာ မဟုတ်တဲ့အတွက် ဘာမှပြောလို့မရသေးဘူး။ အခုက လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ဆက်ရှိနေ သေးတယ်။ ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ပြီးလို့ အပြစ်ရှိတယ်ဆိုတော့မှ ပြည်သူ့ လွှတ်တော်ကလည်း ကြေညာလိုက် ပြီဆိုတော့မှ ကျွန်တော်တို့ကလည်း ပြောလို့ရမှာ။ အခုကဘာဖြစ်မယ် ဆိုတာပြောလို့ မရသေးဘူး” ဟု ဦးအောင်မြင့်က ဆိုသည်။
ဇန်နဝါရီ ၁၅ ရက်နေ့ ရသေ့ တောင်မြို့နယ်တွင် ပြုလုပ်ခဲ့သည့် ရခိုင့်နိုင်ငံတော် အချုပ်အခြာအာဏာကျဆံုးခြင်း (၂၃၃) နှစ်မြောက် ဝမ်းနည်းဖွယ်အထိမ်းအမှတ် စာ ပေဟောပြောပွဲ၌ ဒေါက်တာအေး မောင်က ”ဗမာများအနေဖြင့် ရခိုင်လူမျိုးများကို ဗမာ့ကျွန်အဖြစ် လောက်သာထားရှိပြီး တန်းတူအခွင့်အရေးမပေးကြောင်း၊ အချုပ်အခြာအာဏာ ရရှိရေးအတွက် နည်းလမ်းနှစ်ခုသာရှိကြောင်း၊ လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးနည်းနှင့် ဆောင်ရွက်နေသည့်ပုဂ္ဂိုလ်များရှိ ကြောင်း၊ မိမိမှာ နောက်တစ်နည်းဖြစ် သော လူထုဗဟိုပြုနိုင်ငံရေးနည်း ဖြင့် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း၊ လက်ရှိနိုင်ငံရေးအားနည်းချက်ကို အခွင့်ကောင်းယူ၍ ပန်းတိုင်ရောက် အောင် ဆောင်ရွက်သွားကြရန် တိုက်တွန်းလိုကြောင်း၊ နောက်နှစ်များစွာရောက်တိုင်းမှာ အချုပ်အခြာ အာဏာ ပြန်လည်ရယူလိုရေးစိတ် ဓာတ်မွေးရန်၊ လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးနှင့် လူထုဗဟိုပြုနိုင်ငံရေး အားလုံး၏ပန်းတိုင်သည် အချုပ်အခြာအာဏာကို ပြန်လည်ရယူနိုင် ရေးသာဖြစ်ကြောင်း စသည်ဖြင့် ဟောပြောခဲ့သည်ဟု အစိုးရထုတ် ပြန်ချက်က ဖော်ပြသည်။
ယင်းသို့ဟောပြောခဲ့ခြင်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး ရသေ့တောင်မြို့ရဲစ ခန်းတွင် နိုင်ငံတော်အကြည်အညို ပျက်စေမှု ရာဇသတ်ကြီးပုဒ်မ ၅ဝ၅ (ခ) (ဂ)၊ မတရားအသင်းအက် ဥပဒေပုဒ်မ ၁၇ (၁) (၂) တို့ဖြင့် အမှုဖွင့်ထားပြီး ဇန်နဝါရီ ၁၈ ရက်က စစ်တွေမြို့ အိုးတန်းရပ်ကွက် ရွှေလင်ဗန်းလမ်းရှိ နေအိမ်တွင် ရဲ ပ်ဖွဲ့က ဖမ်းဆီးခဲ့ကြောင်းသိရသည်။ ဒေါက်တာအေးမောင်သည် ၂ဝ၁၇ ခုနှစ် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲတွင် အမ်းမြို့နယ်ပြည်သူ့လွှတ် တော်ကိုယ်စားလှယ်နေရာ၌ ဝင် ရောက်ယှဉ်ပြိုင် အနိုင်ရထားသူဖြစ် သည်။ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲကို ယခုနှစ်အတွင်း ကျင်းပသွားမည်ဟု ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်မှ သိရသည်။
ပြည်ပချေးငွေဖြင့် ဆောင်ရွက်သည့် လုပ်ငန်းများကို ဝန်ကြီးဌာနများက စီမံကိန်းပြီးစီးမှု စောင်?
ဗီယက်နမ်-မြန်မာချစ်ကြည်ရေး အသင်းနှင့် မြန်မာ-ဗီယက်နမ် ချစ်ကြည်ရေးအသင်းတို့ ဟနွိုင်းမြို့တ
နည်းဥပဒေပြဋ္ဌာန်းပြီးမှသာ မူးယစ်ဆေး သုံးစွဲသူများကို လူမှုရေးပြစ်ဒဏ် ချမှတ်ခြင်းကို ဖော်ဆောင်မည်